အတိအကျတူ Code ကို ID ကိုကတ်, အတိအကျတူနံပါတ် ID ကိုကတ်, Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးအတိအကျတူ Code ကိုသတ်မှတ်ခြင်း Card ကို, အတိအကျတူနံပါတ် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး ID ကိုကတ်, ID ကိုအတိအကျတူနံပါတ်ကဒ်, အတိအကျတူ Code ကို EM Card ကို, အတိအကျတူနံပါတ် EM Card ကို, အတိအကျတူနံပါတ် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး EM Card ကို
 » RFID Card ကို » ချိတ်ဆက်မှု Chip ကဒ် » EM ကဒ် / LF Card ကို
အတိအကျတူနံပါတ် ID ကိုကတ်, အတိအကျတူ Code ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး EM Card ကို
EM ကဒ် / LF Card ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေးအတိအကျတူ Code ကိုသတ်မှတ်ခြင်း Card ကို, အတိအကျတူ Code ကို EM Card ကို, အတိအကျတူ Code ကို ID ကိုကတ်, အတိအကျတူနံပါတ် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး EM Card ကို, အတိအကျတူနံပါတ် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး ID ကိုကတ်, အတိအကျတူနံပါတ် EM Card ကို, အတိအကျတူနံပါတ် ID ကိုကတ်, ID ကိုအတိအကျတူနံပါတ်ကဒ်
အတိအကျတူနံပါတ် EM Card ကို access ကိုထိန်းချုပ်မှုနှင့်ချန်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုသည်.
အကွာအဝေး Read ရေး: 2~ 15cm, စာဖတ်သူနှင့်လျှောက်လွှာပတ်ဝန်းကျင်ပေါ် မူတည်.
တည်မြဲခြင်း: >100,000 ကြိမ်
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -20℃ ~ + 80 ℃(-4℉ ~ + 176 ℉)
အရွယ်: ထူးအိမ်သင်ကဒ်: 85.5× 54 × 0.84mm
non-စံပါးလွှာကဒ်: 85.5× 54 × 1.05mm
အထူကဒ်: 85.5× 54 × 1.80mm
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ: PVC, ပေ, ကို ABS, စက္ကူ, စသည်တို့ကို.
အတိအကျတူနံပါတ် ID ကိုကဒ်အတွက်စိတ်ကြိုက် ID ကိုအနိမ့်ကြိမ်နှုန်းကဒ်ဖြစ်ပါသည်, အတိအကျတူညီပြည်တွင်းရေးနံပါတ်စဉ်, မျိုးစုံကတ်များ ID နံပါတ်အတိအကျတူညီ. ပြည်တွင်းရေးအမှတ်စဉ်နံပါတ် ID ကိုအနိမ့်ကြိမ်နှုန်းကဒ်တူညီသောလမ်း: ဒါဟာ၏ hexadecimal ပြည်တွင်းရေးအမှတ်စဉ်အရေအတွက်နိုင်ပါတယ်5bytes, ABA ၏ပြည်တွင်းရေးနံပါတ်စဉ် (8H ကို) ပုံစံ, Wiegand26 ပုံစံ၏ပြည်တွင်းရေးနံပါတ်စဉ်, အခြားပုံစံလိုကျလြှောကျနိုငျ; မည်သည့်လုပ်နိုင်သောအနေနဲ့ပြည်တွင်းရေးနံပါတ်စဉ်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်. ID ကိုအတိအကျတူညီကဒ်နည်းပညာပိုင်းကိုပိုမိုရင့်ကျက်.
Card ကိုမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်သို့မဟုတ်ပိုးမျက်နှာပြင်အရောင်ပုံစံများနိုင်ပါသည်, လိုဂို, ကုဒ်.
key ကိုလက်စွပ်သို့လည်းလုပ်နိုင်ပါသည်, လက်ပတ်, အကြွေစေ့ငွေကြေးကတ်များ, Epoxy ကတ်များနှင့်အခြားပုံစံမျိုးစုံ.
ကင်းလှည့်စနစ်အား, အချိန်တက်ရောက်သူစနစ်က, အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ်, ဝင်ပေါက်ကိုယ်ရံတော်စနစ်က, အသွားအလာ, ယာဉ်ရပ်နားစီမံခန့်ခွဲမှု, ဝိသေသလက္ခဏာစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း, ရောင်းချမုန့်ညက်စီမံခန့်ခွဲမှု, တဦးတည်းကတ် Solutions, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အ, ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းဖော်ထုတ်ခြင်း၏နှင့်အခြားဒေသများ.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်အတိအကျတူနံပါတ် ID ကိုကတ်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို, အတိအကျတူ Code ကို Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး EM Card ကို
prev: လုံးဝဆက်တိုက်နံပါတ် EM Card ကို, စဉ်ဆက်မပြတ် Serial Wiegand Code ကို ID ကိုကတ်
နောက်တစ်ခု: EM4200 Chip ကဒ်
ကားရပ်နားကွင်းကို Long-အကွာအဝေး ID ကိုထူထပ်သောကတ်, ကားရပ်နားကွင်းကို Long Range ID ကိုကတ်
Deviation ကြိမ်နှုန်း Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Card ကို, 250kHz Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Card ကို, 375kHz Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Card ကို, 500kHz Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Card ကို
ID ကို Blank က Writable နံပါတ်ကဒ်, ID ကို Clone နံပါတ်ကဒ်
EM Chip စမတ် Access ကိုထိန်းချုပ်ရေး Card ကိုဖတ်အဝေးသင် 80mm, ID ကို & IC သတ်မှတ်ခြင်းကဒ် / Tag ကို